Halloween သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် | လက်မှုပညာ On
Alicia tomero | 30/10/2021 17:14 | ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ, လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်
ဒီ Halloween အတွက် ပျော်စရာကောင်းအောင် လုပ်နည်းကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ချောကလက်တွေနဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေ။ ကတ်ထူပြွန်အချို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုကာ အနက်ရောင်ဆေးခြယ်ကာ ကတ်ထူပြားဖြင့် ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြောက်စရာကောင်းပြီး မူရင်း. မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆို အလှဆင်လိုလျှင် ၎င်းတို့ကို ဇောက်ထိုးထားနိုင်စေရန် ဤအိုင်ဒီယာသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကလေးများအတွက်လည်း အံ့သြစရာကောင်းလှပါသည်။
1 သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် သုံးယောက်အတွက် ငါသုံးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေက
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် သုံးယောက်အတွက် ငါသုံးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေက
ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် ကတ်ထူပြွန် ၃ ခု။
အနက်ရောင် acrylic ဆေးသုတ်။
လက်မောင်းငယ်များအတွက် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်ကတ်ထူပြား။
အနက်ရောင်၊ အနီရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင် ပိုက်သန့်စင်သူများ။
Halloween အပြင်အဆင်ပါသော သကြားလုံးအတုံးငယ်3ခု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြွန်များဖြင့် ဆေးသုတ်သည်။ အနက်ရောင် acrylic ဆေး။ သူတို့ရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ပိုကောင်းအောင် ခြောက်သွေ့စေတယ်။
တစ်ဦးအတွက် အနက်ရောင်ကဒ် ကျွန်ုပ်တို့သည် vampire ၏အတောင်ပံများကိုဆွဲကြသည်။ လက်နဲ့လုပ်လို့ ရတာနဲ့ စကေးလုပ်ဖို့အတွက် ပြွန်ကို သူ့ဘေးမှာ ချထားပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား။ တောင်ပံကို ဖြတ်ပြီး နောက်ထပ် အတောင် ၅ ခု ပြုလုပ်ရန် ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ၎င်းကို ပြွန်ကြားတွင် နောက်ပိုင်းတွင် ထည့်နိုင်ရန် သေးငယ်သော တက်ဘ်တစ်ခု ရှိရပါမည်။
ခြောက်သေးသေးလေးလောက် ခြယ်တယ်။ အနီကတ်စတော့တွင် တြိဂံများ. သူတို့ကို ဖြတ်ပြီး ဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။
ပူသောဆီလီကွန်၏အကူအညီဖြင့် ပလပ်စတစ်မျက်လုံးကို ကော်တယ်။ ငါတို့သည် paste အနီရောင်တြိဂံလေးတွေ နားရွက်ကဲ့သို့ ခေါင်းထက်၊
ငါတို့လုပ်တယ် သေးငယ်သော ဖြတ်တောက်မှု နှစ်ခု ပြွန်၏နှစ်ဖက်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနက်ရောင်ကတ်ထူပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အတောင်ပံများကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါမည်။ ဖမ်းတယ်။ ပိုက်သန့်စင်သူများ လင်းနို့၏ ခြေသလုံးတို့ကို ဖြတ်လေ၏။ ၎င်းတို့ကို ဆီလီကွန်ဖြင့် ပြွန်အောက်ခြေတွင် ကပ်ပါမည်။ ဤခြေထောက်များ၏အသေးစိတ်အချက်မှာ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များကို သစ်ကိုင်းတစ်ခုမှ သို့မဟုတ် ဆင်တူသည့်အရာတစ်ခုမှ ဇောက်ထိုးဆွဲထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်ကတ်ထူပြားပေါ်တွင် ဆေးသုတ်ကြသည်။ ခြောက်လက်များ ခုတ်ထစ်ကြ၏။ ဆီလီကွန်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အလယ်တွင် ကပ်ထားသည်။ ချောကလက်ဘားတစ်ခု ဖြတ်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဝိုင်းရံထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » Halloween သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များ
ဝက်ဝံလက်မှုပညာကို မည်သည့်အခါသမယတွင်မဆို လုပ်ပါ။